Franck Ribery: Oo Muujiyay sida uu u jecel yahay Diintiisa Islaamka” | Arrimaha Bulshada
Home News Franck Ribery: Oo Muujiyay sida uu u jecel yahay Diintiisa Islaamka”
Franck Ribery: Oo Muujiyay sida uu u jecel yahay Diintiisa Islaamka”
Bulsha:- Ciyaaryahanada Bayern Munich ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaal degay guushii ay ka gaareen kooxda reer Belguim ee Anderlecht iyaga oo soo xirtay dharkii u caadada ahaa ee ay sanad kasta xiran jireen.
Kooxda Bayern munich ayaa si fiican ku bilaabatay tartanka champions league kadib markii ay 3-0 ku garaaceen kooxda Anderlecht.
Laacibiinta kooxda ayaa sidoo kale ku dabaal degay Qaar ka mid ah iyaga oo gacamaha ku wada haysta khamri kadib markii ay dhamaatay ciyaartii ay la yeesheen Anderlecht.
Xiddiga reer Frnace ee Franck Ribery Ayaa ahaa xiddiga kaliya ee aan haysan khamriga laakiin la dabaal degay xiddigaha ay isku kooxda yihiin.
Franck Ribery ayaan seegin dabaal dega kooxdiisa laakiin aan sidoo kale taaban khamriga maadama ay diintiisa islaamka u diidayso midaas.
Weraryahanka werarka uga ciyara kooxda Bayer iyo xulka Fransa ee Franck Ribery ayaa la sheegaa inuu yahay xidig heysta Diinta Islaamka waxaana markan uu si dhab ah u muujiyay inuu yahay islaam kadib markii uu diiday in uu In uu taabto ama uu cabo qamri oo ciyaartoda kooxdisa ay ku dabaal dagayeen maadama aysan diintu u baneyn Cabida qamriga.